नेपालमै पहिलो पटक भैंसी सम्मेलन हुँदै – BRTNepal
काठमाडौं: ०६:२१ | Colorodo: 17:36
बिआरटीनेपाल २०७८ कार्तिक ६ गते ७:१३ मा प्रकाशित
चितवनको रामपुरमा कार्तिक ८ देखि १२ गतेसम्म भैंसी सम्मेलन हुने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको आयोजनामा ‘१०औं एसियन बफेलो कंग्रेस २०२१’ हुने भएको हो ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिइएको हो । भैंसी पालनको विकास र नयाँ प्रविधि तथा भैंसीसँग सम्बन्धित नयाँ आविष्कार घोषणा गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भूमिनन्दन देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । साथै यसले वैज्ञानिकहरूबीच अन्तरसम्बन्ध विस्तार र खोजी भएका नयाँ सफलताको बाँडफाँडका लागि पनि मद्दत मिल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपालमा करिव ५५ लाख भैंसी रहेको र देशमा हुने दुध उत्पादनको करिव ६५ प्रतिशत भैंसीले योगदान गरेको डा. देवकोटाले बताउनुभयो । मासुमा समेत ५५ प्रतिशत भैंसीको योगदान रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा लिमे, पारकोटे, गड्डी, तराई जात र मुर्रा प्रजातिका भैंसी छन् । पछिल्लो समय हाइब्रिडसमेत बनाएर भैंसी पालन हुँदै आएको छ ।